ठूलो लुम्पेकमा बाढी पहिरोले कति क्षति पुर्यायो ? (हेर्नुहोस् विवरण) – www.janabato.com
ठूलो लुम्पेकमा बाढी पहिरोले कति क्षति पुर्यायो ? (हेर्नुहोस् विवरण)
१५ श्रावण २०७६, बुधबार ११:०५ July 31, 2019 Janabato Online
साउन १५, बुटवल । गुल्मीको ठूलो लुम्पेकमा साउन ६ गते राती बाढी पहिरोका कारण ७८ घर र गोठमा पूर्ण क्षति भएको छ ।
त्यसैगरी ४० वटा घर गोठमा आंशिक क्षति पुगेको छ । ३७ वटा चर्पी पूर्ण क्षति र १८ वटा आंशिक क्षति भएको छ । ठूलो लुम्पेकमा मात्रै पहिरोले घर भत्किएर ३ जनाको र बगाएर दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने २ जना अझै घाइते भई काठमाडौमा उपचार भइरहेको छ ।
भैसी, गाई, कुखुरा, बंगुर लगायतका पशुपंक्षिहरु ३४२ वटा भएको छ । टोटल ७२५ घर बाढी पहिरोबाट प्रभावित भएका छन् भने सवैभन्दा धेरै सिंदीमा रहेको ९० वटामा यसबाट प्रभावित भएको छ । पहिरोले कसिन्थलामा दुई र सिंदीमा २ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
बाढी पहिरोसंगै सरकारले पर्याप्त राहत तथा बसोबासको व्यवस्था गर्न नसकेको पीडितले बताएका छन् । राहत लिएर उद्दारका लागी घट्नास्थल पुगेका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले सरकारले पीडितलाई पर्याप्त राहत तथा बसोबासको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । उनले सरकारले पीडितलाई सबै व्यवस्था गर्यौं भनेर गलत प्रचार गरेको भन्दै आफुहरुले सक्दो प्रयास गर्ने बताए ।
राहतका लागी अहिले देशैभर सहयोग जुटाउने क्रम चलिरहेको छ । तराईमा बसोबास गर्ने लुम्पेकीहरुले पीडितहरुको सहयोगका लागी सहयोग जुटाउन लागी परेका छन् । होमबहादुर राहादीको नेतृत्वमा राहत संकलन भएको छ भने बुटवल क्षेत्रमा यमबहादुर थापाको नेतृत्वमा राहत संकलन भइरहेको छ । बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षतिप्रति प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
← मेडिकल माफिया देखि शैक्षिक माफिया ’भन्दै बिप्लवका बिद्याथीले टांगे कालो ब्यानर
थारु पत्रकार संघ नेपाल कपिलबस्तु शाखाको अधिवेशन हुने →
हिन्दुस्तान टाइम्सका पत्रकार प्रशान्त झामाथि यौनदुव्र्यवहारको आरोप
२२ आश्विन २०७५, सोमबार १४:०१ Janabato Online Comments Off on हिन्दुस्तान टाइम्सका पत्रकार प्रशान्त झामाथि यौनदुव्र्यवहारको आरोप
अखिल (क्रान्तिकारी) क्याम्पस जिल्ला अध्यक्ष उषाकिरण र रावल पक्राउ
२९ श्रावण २०७५, मंगलवार ०३:१३ Janabato Online Comments Off on अखिल (क्रान्तिकारी) क्याम्पस जिल्ला अध्यक्ष उषाकिरण र रावल पक्राउ